သဈမငျး၏ အစှမျးထကျပုံကို ဗဟုသုတအဖွဈ မြှဝပေါတယျ - Myanmar Express
သဈမငျး၏ အစှမျးထကျပုံကို ဗဟုသုတအဖွဈ မြှဝပေါတယျ
July 31, 2020 By Myanmar Express in ဗဟုသုတ No Comments Tags: သဈမငျး
သိမိသမြှ ဗဟုသုတပါ။ သဈတို့ရဲ့ဘုရငျမို့ရရှိသူတှေ သိမျးဆညျးကွပါတယျ။တောတောငျကွီးတှမှောသာ ပေါကျတတျပွီး။ မကောငျးတဲ့ သဈဆိုး၊ သဈတောကျ သဈမကျြမြားနဲ့ သဈဘီလူး။ သဈစုနျးတှကေိုနိုငျတယျယုံလို့ ဆောငျ ထားတတျကွပါတယျ။အခြို့လညျး အိမျမှာ စိုကျပြိုးကွပါတယျ။ဆေးအသုံးအဖွဈ ဗိုကျအောငျ့ဗိုကျနာ လထေိုးလအေောငျ့ဖွဈပါက နနှငျးမှုနျ့ ဆား သဈမငျးခေါကျကိုသှေးလိမျးပေးပါက သကျသာပြောကျကငျးပါသညျ။
အခြို့အနာပွညျ တညျရောငျရမျးနပေါက သဈမငျးရှကျကို ထုခပြွေီးအုံ ခွငျးပွုပါက အမွနျပငျပွညျထှကျပွီအသားနုတကျပါသညျ။သဈမငျး ဘယျလို အသုံးပွုတာလဲ ဆိုတာကို မဟာမွိုငျတော၊ ပလ်လငျတောငျက ဘရသေ. ရှငျပညာဒီပ ကို မေးလြောကျမိတော့..ဒကာတဲ့ ဒုတ်တာရထေဲဆား အနညျးငယျထညျ့ပွီး သဈမငျးကို ၁နာရီစိမျပွီးမှ သုံးရငျ ပိုအစှမျးထကျတယျ လို့မိနျ့ပါတယျ။
ဒုတ်တာရနေဲ့စိမျပွီးတဲ့ သဈမငျးကို ကြောကျပဉျြမှာ ရကြေဲကြဲ နဲ့မြားမြားလေးသှေးပွီး သဈနဲ့ပတျ သကျတဲ့ လူအသုံးအဆောငျ၊ အိမျ၊အဆောကျအဦ တှကေိုမကွာခဏ ပကျဖနျြးခွငျးပွု ကွတယျဆိုတာ ကိုမိနျ့ပါတယျ။ယုံသူတို့ လိုသလိုဆောငျရှတျနိုငျ စဖေို့ မတ်ေတာရညျကာ တငျပွလိုကျပါတယျ။ဂုဏျတျော(၉)ပါး ရှတျပွီး သှေးပါက ပိုစှမျးပါကွောငျး။မနောမယဂြာနယျမှာ သဈတို့အရှငျသဈမငျးသခငျ စာမူရေးခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ (ရဲမြိုးသူ ဗောဓိမွိုငျ)
” သဈ‌မငျး ပုံပါ ”
သဈ‌ဆိုး ဝါးဆိုး‌တှကေို နိုငျ‌နငျးတယျ‌လို့ ဆိုပါတယျ‌။ အိမျ‌‌တှမှော သဈ‌ဆိုတာ မပါမဖွဈ‌ပါ။ သဈ‌ဝါး‌တှဆေိုတာကလညျး ‌တောမှာ‌ပေါကျ‌ကွတယျ‌။အခြို့သဈ‌ဝါး‌တှကေ အန်တရာယျ‌ဖွဈ‌‌စတေတျ‌တဲ့ ကမ်မစိဒ်ဓိရှငျ‌‌တှရေဲ့ အရိပျ‌အ‌ငှေ့‌တှပေါလာတတျ‌ကွပါတယျ‌။ အဲလိုသဈ‌ဝါးမြိုးနဲ့ ‌ဆောကျ‌မိရငျ‌ အဲဒီအိမျ‌မှာ‌ နကွေသူမြားအတှကျ‌ မ‌ကောငျး‌တော့ပါဘူး။ပွဿနာဖွဈ‌တာမြားလာပါတယျ‌။ သတိပွုမိရငျ‌ ညည‌တောကျ‌‌ခေါကျ‌သံလိုမြိုး ကွာရတတျ‌ပါတယျ‌။ ဒါကတကယျ‌ပါ လကျ‌သမား‌တှသေိကွပါတယျ‌။ကဲ ဒီအခါဘယျ‌သဈ‌ဝါးက မ‌ကောငျးဆိုးဝါးသ‌ဘောပါ‌နတောလဲ။
ဘယျ‌လိုသိမလဲ သဈ‌‌ခွောကျ‌လို့လညျး‌ ချေါတယျ‌‌ အဲလို‌တောကျ‌ခေါကျ‌တဲ့ သဈ‌ဝါးဆိုရငျ‌‌လေ။ ဘယျ‌‌နရောမှာ သုံးမိမှနျး မသိ‌တော့ ဘယျ‌လိုဖယျ‌မလဲ။နရောသိရငျ‌‌တောငျ‌ ပရိ‌ဘောဂကို ဖကျြ‌ဆီးပွီးအသဈ‌လုပျ‌ရမှာ‌နျော‌။ အဲလိုဆို ကုနျ‌ကစြားရိတျ‌‌တှေ မြား‌တော့မယျ‌။ အသဈ‌လုပျ‌ရငျ‌‌တောငျ‌ သဈ‌ဝါးအပိုငျးတငျ‌မပွီးဘူး ။ တိုကျ‌‌တှဆေိုရငျ‌ ပနျးရံကိစ်စ‌တှေ ဒကျ‌ခ‌ရေးရှငျးအပိုငျး‌တှထေိ ပွနျ‌ကုနျ‌ရ‌တော့မယျ‌။သဈ‌‌ခွောကျ‌ကိုနိုငျ‌တာ အခုပုံပါ သဈ‌မငျးပါပဲ။ ‌တောကျ‌‌ခေါကျ‌သံကွားရတဲ့‌ နရောမှာ သဈ‌မငျးကို သပျ‌သ‌ဘောမြိုး ရိုကျ‌လိုကျ‌ရငျ‌ ပွီးပါတယျ‌။
အကယျ‌လိုိ့ ‌သခြောခငျြ‌ရငျ‌ ‌တောကျ‌‌ခေါကျ‌သံကွားကွား မကွားကွား အိမျ‌ရဲ့ ‌လေးဖကျ‌‌လေးတနျ‌မှာ သဈ‌မငျး အသားစ‌လေး‌တှကေို သပျ‌ရိုကျခဲ့ရငျ‌ ရပါတယျ‌။တောကျ‌‌ခေါကျ‌သံဆိုလို့ လူ‌တောကျ‌‌ခေါကျ‌သလိုမြိုး မဟုတျ‌ဘူး‌နျော‌။ အိမျ‌‌မွောငျ‌စုတျ‌ထိုးသလိုမြိုး သ‌ဘောဆငျ‌ပါတယျ‌။သဈ‌မငျးက အ‌ခေါကျ‌ပိုငျးမှာ ပုံပါအတိုငျး ကှငျး‌ခြိတျ‌က‌လေး‌တှေ ဆကျ‌‌နပေါတယျ‌။ ဒါ‌တှကေ ဘုရား‌ဟောမဟုတျ‌ပါဘူး။ ဘုရား‌ဟော မဟုတျလို့ ငါတို့‌တော့ ပယျ‌မယျ‌ဆိုသူ‌တှေ အတှကျ‌က‌တော့ ရှငျးပွဖို့မရှိပါဘူး။သို့‌သျော‌ ဘုရား‌ဟော မဟုတျ‌လို့ ပယျ‌ပွီး‌တော့ ‌လောကီနယျ‌အတှငျးမှာ‌ နကွေသူ‌တှေ အဖို့ရာ အလှနျ‌တရာမှ အန်တရာယျ မြားလှပါတယျ‌။
ဘာဖွဈ‌လို့လဲဆို‌တော့ သဈ‌‌ခွောကျ‌မှာ အစှဲရှိ‌နတေဲ့ ကမ်မစိဒ်ဓိရှငျ‌က မ‌ကောငျးရာ မ‌ကောငျး‌ကွောငျးလုပျ‌ဖို့ အိမျ‌ရှငျ‌‌နရောကို တကယျ့‌အိမျ‌ရှငျ ‌မ‌နေ‌သေးခငျ‌ကတညျးက ဦးသှားလို့ပါပဲ။တဈ‌ခု‌တော့ရှိတာ‌ပေါ့ အခွားသမာဓိ အား‌ကောငျးသူ သမထသမားဖွဈ‌‌စေ၊ သမထမလုပျ‌‌သျော‌လညျး ဝိပဿနာသ‌ဘော အသိအား‌ကောငျးသူ တရားရှငျ‌ဖွဈ‌‌စေ‌ပေါ့ ထိုသူတဈ‌ဦးတဈ‌‌ယောကျ‌ရဲ့ အရှိနျ‌အဝါ‌ကွောငျ့‌လညျး သဈ‌‌ခွောကျ‌မှာစှဲ‌နတေဲ့ ကမ်မစိဒ်ဓိသ‌ဘောကို ဖကျြ‌စီးနိုငျ‌ပါတယျ‌။ဒါမြိုးကလညျးကွုံဦးမှ‌လေ။ ‌သခြောတာက‌တော့ ‌တောကျ‌‌ခေါကျ‌သံကွားကွား မကွားကွား သဈ‌မငျးကို အိမျ‌သဈ‌ အိမျ‌‌ဟောငျးမ‌ရှေး ညှပျ‌ထညျ့‌‌ပေးလိုကျ‌ရငျ‌ ရပါပွီ။
ဒါ့အပွငျ သဈ‌မငျးဟာ ပ‌ ‌ယော ဂဖွဈ‌သူကို ဖွဈ‌တဲ့‌နရောမှာ ထိ‌တှထေ့ားရငျ‌ ကာယကံရှငျ‌ဟာ သိတတျ‌သူဆိုရငျ‌ ခန်ဓာကိုယျ‌က‌နေ စူးကနဲ စူးကနဲနဲ့ ကမ်မစိဒ်ဓိစကျ‌‌တှေ အ‌နှေးနဲ့အမွနျ‌ ထှကျ‌တာကို သိပါလိမျ့‌မယျ‌။ဒါက‌တော့ ကြှနျ‌‌တျော‌ စမျးကွညျ့‌ဖူးတာကို ပွောပွတာပါ။ ဖွဈ‌တဲ့‌နရောမသိရငျ‌ ဦး‌ခေါငျးနဲ့ ဝမျးဗိုကျ‌‌ပျေါတငျ‌ပါတယျ‌။
credit – ဆရာသိနျးထူး Ph-09259865571 Ph-09797751889
သစ်မင်း၏ အစွမ်းထက်ပုံကို ဗဟုသုတအဖြစ် မျှဝေပါတယ်
သိမိသမျှ ဗဟုသုတပါ။ သစ်တို့ရဲ့ဘုရင်မို့ရရှိသူတွေ သိမ်းဆည်းကြပါတယ်။တောတောင်ကြီးတွေမှာသာ ပေါက်တတ်ပြီး။ မကောင်းတဲ့ သစ်ဆိုး၊ သစ်တောက် သစ်မျက်များနဲ့ သစ်ဘီလူး။ သစ်စုန်းတွေကိုနိုင်တယ်ယုံလို့ ဆောင် ထားတတ်ကြပါတယ်။အချို့လည်း အိမ်မှာ စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ဆေးအသုံးအဖြစ် ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာ လေထိုးလေအောင့်ဖြစ်ပါက နနွင်းမှုန့် ဆား သစ်မင်းခေါက်ကိုသွေးလိမ်းပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းပါသည်။
အချို့အနာပြည် တည်ရောင်ရမ်းနေပါက သစ်မင်းရွက်ကို ထုချေပြီးအုံ ခြင်းပြုပါက အမြန်ပင်ပြည်ထွက်ပြီအသားနုတက်ပါသည်။သစ်မင်း ဘယ်လို အသုံးပြုတာလဲ ဆိုတာကို မဟာမြိုင်တော၊ ပလ္လင်တောင်က ဘရသေ. ရှင်ပညာဒီပ ကို မေးလျောက်မိတော့..ဒကာတဲ့ ဒုတ္တာရေထဲဆား အနည်းငယ်ထည့်ပြီး သစ်မင်းကို ၁နာရီစိမ်ပြီးမှ သုံးရင် ပိုအစွမ်းထက်တယ် လို့မိန့်ပါတယ်။
ဒုတ္တာရေနဲ့စိမ်ပြီးတဲ့ သစ်မင်းကို ကျောက်ပျဉ်မှာ ရေကျဲကျဲ နဲ့များများလေးသွေးပြီး သစ်နဲ့ပတ် သက်တဲ့ လူအသုံးအဆောင်၊ အိမ်၊အဆောက်အဦ တွေကိုမကြာခဏ ပက်ဖျန်းခြင်းပြု ကြတယ်ဆိုတာ ကိုမိန့်ပါတယ်။ယုံသူတို့ လိုသလိုဆောင်ရွတ်နိုင် စေဖို့ မေတ္တာရည်ကာ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ရွတ်ပြီး သွေးပါက ပိုစွမ်းပါကြောင်း။မနောမယဂျာနယ်မှာ သစ်တို့အရှင်သစ်မင်းသခင် စာမူရေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ (ရဲမျိုးသူ ဗောဓိမြိုင်)
” သစ်‌မင်း ပုံပါ ”
သစ်‌ဆိုး ဝါးဆိုး‌တွေကို နိုင်‌နင်းတယ်‌လို့ ဆိုပါတယ်‌။ အိမ်‌‌တွေမှာ သစ်‌ဆိုတာ မပါမဖြစ်‌ပါ။ သစ်‌ဝါး‌တွေဆိုတာကလည်း ‌တောမှာ‌ပေါက်‌ကြတယ်‌။အချို့သစ်‌ဝါး‌တွေက အန္တရာယ်‌ဖြစ်‌‌စေတတ်‌တဲ့ ကမ္မစိဒ္ဓိရှင်‌‌တွေရဲ့ အရိပ်‌အ‌ငွေ့‌တွေပါလာတတ်‌ကြပါတယ်‌။ အဲလိုသစ်‌ဝါးမျိုးနဲ့ ‌ဆောက်‌မိရင်‌ အဲဒီအိမ်‌မှာ‌ နေကြသူများအတွက်‌ မ‌ကောင်း‌တော့ပါဘူး။ပြဿနာဖြစ်‌တာများလာပါတယ်‌။ သတိပြုမိရင်‌ ညည‌တောက်‌‌ခေါက်‌သံလိုမျိုး ကြာရတတ်‌ပါတယ်‌။ ဒါကတကယ်‌ပါ လက်‌သမား‌တွေသိကြပါတယ်‌။ကဲ ဒီအခါဘယ်‌သစ်‌ဝါးက မ‌ကောင်းဆိုးဝါးသ‌ဘောပါ‌နေတာလဲ။
ဘယ်‌လိုသိမလဲ သစ်‌‌ခြောက်‌လို့လည်း‌ ခေါ်တယ်‌‌ အဲလို‌တောက်‌ခေါက်‌တဲ့ သစ်‌ဝါးဆိုရင်‌‌လေ။ ဘယ်‌‌နေရာမှာ သုံးမိမှန်း မသိ‌တော့ ဘယ်‌လိုဖယ်‌မလဲ။နေရာသိရင်‌‌တောင်‌ ပရိ‌ဘောဂကို ဖျက်‌ဆီးပြီးအသစ်‌လုပ်‌ရမှာ‌နော်‌။ အဲလိုဆို ကုန်‌ကျစားရိတ်‌‌တွေ များ‌တော့မယ်‌။ အသစ်‌လုပ်‌ရင်‌‌တောင်‌ သစ်‌ဝါးအပိုင်းတင်‌မပြီးဘူး ။ တိုက်‌‌တွေဆိုရင်‌ ပန်းရံကိစ္စ‌တွေ ဒက်‌ခ‌ရေးရှင်းအပိုင်း‌တွေထိ ပြန်‌ကုန်‌ရ‌တော့မယ်‌။သစ်‌‌ခြောက်‌ကိုနိုင်‌တာ အခုပုံပါ သစ်‌မင်းပါပဲ။ ‌တောက်‌‌ခေါက်‌သံကြားရတဲ့‌ နေရာမှာ သစ်‌မင်းကို သပ်‌သ‌ဘောမျိုး ရိုက်‌လိုက်‌ရင်‌ ပြီးပါတယ်‌။
အကယ်‌လိုိ့ ‌သေချာချင်‌ရင်‌ ‌တောက်‌‌ခေါက်‌သံကြားကြား မကြားကြား အိမ်‌ရဲ့ ‌လေးဖက်‌‌လေးတန်‌မှာ သစ်‌မင်း အသားစ‌လေး‌တွေကို သပ်‌ရိုက်ခဲ့ရင်‌ ရပါတယ်‌။တောက်‌‌ခေါက်‌သံဆိုလို့ လူ‌တောက်‌‌ခေါက်‌သလိုမျိုး မဟုတ်‌ဘူး‌နော်‌။ အိမ်‌‌မြောင်‌စုတ်‌ထိုးသလိုမျိုး သ‌ဘောဆင်‌ပါတယ်‌။သစ်‌မင်းက အ‌ခေါက်‌ပိုင်းမှာ ပုံပါအတိုင်း ကွင်း‌ချိတ်‌က‌လေး‌တွေ ဆက်‌‌နေပါတယ်‌။ ဒါ‌တွေက ဘုရား‌ဟောမဟုတ်‌ပါဘူး။ ဘုရား‌ဟော မဟုတ်လို့ ငါတို့‌တော့ ပယ်‌မယ်‌ဆိုသူ‌တွေ အတွက်‌က‌တော့ ရှင်းပြဖို့မရှိပါဘူး။သို့‌သော်‌ ဘုရား‌ဟော မဟုတ်‌လို့ ပယ်‌ပြီး‌တော့ ‌လောကီနယ်‌အတွင်းမှာ‌ နေကြသူ‌တွေ အဖို့ရာ အလွန်‌တရာမှ အန္တရာယ် များလှပါတယ်‌။
ဘာဖြစ်‌လို့လဲဆို‌တော့ သစ်‌‌ခြောက်‌မှာ အစွဲရှိ‌နေတဲ့ ကမ္မစိဒ္ဓိရှင်‌က မ‌ကောင်းရာ မ‌ကောင်း‌ကြောင်းလုပ်‌ဖို့ အိမ်‌ရှင်‌‌နေရာကို တကယ့်‌အိမ်‌ရှင် ‌မ‌နေ‌သေးခင်‌ကတည်းက ဦးသွားလို့ပါပဲ။တစ်‌ခု‌တော့ရှိတာ‌ပေါ့ အခြားသမာဓိ အား‌ကောင်းသူ သမထသမားဖြစ်‌‌စေ၊ သမထမလုပ်‌‌သော်‌လည်း ဝိပဿနာသ‌ဘော အသိအား‌ကောင်းသူ တရားရှင်‌ဖြစ်‌‌စေ‌ပေါ့ ထိုသူတစ်‌ဦးတစ်‌‌ယောက်‌ရဲ့ အရှိန်‌အဝါ‌ကြောင့်‌လည်း သစ်‌‌ခြောက်‌မှာစွဲ‌နေတဲ့ ကမ္မစိဒ္ဓိသ‌ဘောကို ဖျက်‌စီးနိုင်‌ပါတယ်‌။ဒါမျိုးကလည်းကြုံဦးမှ‌လေ။ ‌သေချာတာက‌တော့ ‌တောက်‌‌ခေါက်‌သံကြားကြား မကြားကြား သစ်‌မင်းကို အိမ်‌သစ်‌ အိမ်‌‌ဟောင်းမ‌ရွေး ညှပ်‌ထည့်‌‌ပေးလိုက်‌ရင်‌ ရပါပြီ။
ဒါ့အပြင် သစ်‌မင်းဟာ ပ‌ ‌ယော ဂဖြစ်‌သူကို ဖြစ်‌တဲ့‌နေရာမှာ ထိ‌တွေ့ထားရင်‌ ကာယကံရှင်‌ဟာ သိတတ်‌သူဆိုရင်‌ ခန္ဓာကိုယ်‌က‌နေ စူးကနဲ စူးကနဲနဲ့ ကမ္မစိဒ္ဓိစက်‌‌တွေ အ‌နှေးနဲ့အမြန်‌ ထွက်‌တာကို သိပါလိမ့်‌မယ်‌။ဒါက‌တော့ ကျွန်‌‌တော်‌ စမ်းကြည့်‌ဖူးတာကို ပြောပြတာပါ။ ဖြစ်‌တဲ့‌နေရာမသိရင်‌ ဦး‌ခေါင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက်‌‌ပေါ်တင်‌ပါတယ်‌။
credit – ဆရာသိန်းထူး Ph-09259865571 Ph-09797751889
« ၂၀၂၀ ခုနှဈ ( ၈ )လပိုငျး အတှကျ ခုနှဈရကျ သားသမီးမြား တဈလစာ ဟောစာတမျး လာပါပွီ	» နှဈနဲ့ခြီပွီး တှဲလာတဲ့ ခဈြသူစုံတှဲတှေ ပွတျကုနျတာ ဒီကိစ်စတှကွေောငျ့ပဲ…
နှဈနဲ့ခြီပွီး တှဲလာတဲ့ ခဈြသူစုံတှဲတှေ ပွတျကုနျတာ ဒီကိစ်စတှကွေောငျ့ပဲ…
၂၀၂၀ ခုနှဈ ( ၈ )လပိုငျး အတှကျ ခုနှဈရကျ သားသမီးမြား တဈလစာ ဟောစာတမျး လာပါပွီ
စီးပှားရေး၊ ငှကွေေးကိစ်စ၊ လူမှုရေးနှငျ့ဆိုငျရာ အတိုကျအခိုကျ အနှောငျ့အယှကျတှရှေိလြှငျ
မိနျးမ ရပွီးသှားရငျ လုပျလို့ မရ တော့တဲ့ အရာ (၉) ခု”